Izinkampani Ezihambayo eMiami, eFlorida
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi sebhizinisi Izinkampani Ezihambayo Florida Miami
Susa umthwalo! E-Miami, indawo yethu ye-Fl sinikezela ngezilinganiso zokuhamba ezenziwe ngezifiso zokuhamba kwakho ibanga elide, ukuhamba kwasendaweni, kanye / noma nezidingo zamazwe zokuthumela nezidingo zomhlaba jikelele. Sisebenzela amakhasimende ahlala nabathengisi ngokufanayo eMiami - Dade naseBroward County. Sihlela abanamakhono nabasendaweni ...
IMiami, ngokusemthethweni Idolobha laseMiami, isikhungo sezamasiko, ezomnotho nezezimali eSouth Florida. IMiami yisihlalo saseMiami-Dade County, isifunda esinabantu abaningi kunazo zonke eFlorida. Idolobha limboza indawo engamakhilomitha-skwele angama-56.6 (147 km2), phakathi kwe-Everglades entshonalanga neBiscayne Bay empumalanga; ngesilinganiso se-2018 sabantu abalinganiselwa ku-470,914, iMiami idolobha lesithupha elinabantu abaningi kakhulu e-United States. Indawo yase-Miami yedolobha elikhulu iyikhaya labantu abayizigidi ezingama-6.1 kanye nendawo yesikhombisa ngobukhulu esizweni. Indawo kaMasipala waseMiami iyidolobha lesibili elinabantu abaningi endaweni eningizimu mpumalanga ye-United States nendawo yesine ngobukhulu e-US Miami inenkanyezi yesithathu ende kunazo zonke e-United States enezindawo eziphakeme kakhulu ze-300, i-80 ubude bayo budebude bezinyawo ze-400. IMiami iyisikhungo esikhulu, futhi abaholi kwezimali, kwezentengiselwano, kosiko, kwabezindaba, kwezokuzijabulisa, kwezobuciko, kanye nokuhweba kwamanye amazwe. Indawo iMiami Metropolitan Area ingumnotho omkhulu kakhulu wasemadolobheni eFlorida kanye ne-12th ngobukhulu e-United States nge-GDP yamadola ayi-344.9 ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2017. E-2012, iMiami yahlukaniswa njengedolobha lomhlaba elisezingeni le-Alfa kule yokusungula kweWorld Cities Study Group. E-2010, iMiami ibekwe endaweni yesikhombisa e-United States nase33rd phakathi kwamadolobha omhlaba jikelele mayelana nomsebenzi webhizinisi, imali yabantu, ukushintshana ngolwazi, isipiliyoni samasiko, nokuzibandakanya kwezepolitiki. Ku-2008, iphephabhuku iForbes libeka iMiami "Idolobha Elihlanzekile Kakhulu eMelika", ngenxa yomoya osezingeni eliphezulu unyaka wonke, izikhala ezinkulu eziluhlaza, amanzi okuphuza ahlanzekile, imigwaqo ehlanzekile nezinhlelo zokuvuselela idolobha lonke. Ngokusho kocwaningo lwe2009 UBS lwamadolobha omhlaba i-73, iMiami ibalwe njengedolobha elicebe kakhulu e-United States, nedolobha lesikhombisa emhlabeni ngokucebile ngokuthenga. IMiami ibizwa ngokuthi "I-capital of Latin America" ​​futhi iyidolobha elikhulu kakhulu elinabantu abaningi baseCuba. I-Greater Downtown Miami ingesinye sezindawo ezigxile kakhulu emabhange aphesheya e-United States, futhi iyikhaya lezinkampani eziningi ezinkulu zikazwelonke nezakwamanye amazwe. Isikhungo iCivic Center siyisikhungo esikhulu sezibhedlela, izikhungo zocwaningo, izikhungo zezokwelapha kanye nezimboni ze-biotechnology. Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amabili, iPort of Miami, eyaziwa ngokuthi "I-Cruise Capital of the World", bekuyitheku lokuhamba kwabahamba ngezinyawo emhlabeni. Inakekela eminye yemikhumbi nokuhamba kwemikhumbi emikhulu kunayo yonke emhlabeni, futhi iyichweba elixakeke kakhulu kuzo zombili izimoto zomgibeli kanye nemizila yokuhamba. IMetropolitan Miami ibuye ibe yindawo enkulu yezokuvakasha eningizimu-mpumalanga ye-US izivakashi zakwamanye amazwe, okubalwa inani lesibili kuleli lizwe ngemuva kweNew York City.